Burma or Myanmar? ~ Nge Naing
Sunday, July 01, 2012 Nge Naing6comments
အခုတလော ခါတိုင်းထက် အလုပ်ပိုများလို့ မနက်အစောကြီး အိပ်ရာထတာနဲ့သွားပြီး ည ၉ နာရီ ဆယ်နာရီမှ အိပ်ချိန်ရောက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့နေ့တွေက ပုံမှန်နေ့တွေထက် ပိုများနေပါတယ်။ ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဘာမှမလုပ်နိုင် ဘာစာမှ မဖတ်နိုင်တော့ဘဲ ရေမိုးချိုး ဘုရားရှိခိုးပြီး အိပ်လိုက်၊ မနက်စောကြီး ပြန်ထပြီး အလုပ်သွားလိုက်တာနဲ့ပဲ သံသရာလည်နေလို့ အွန်လိုင်းပေါ် တနေ့တခေါက်တော့ သတင်းဝင်ကြည့် ဖြစ်ပေမဲ့ အစုံလိုက်မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ အခုဒီနေ့တော့ အနည်းငယ် အချိန်ပေးပြီး အရင်သတင်းတွေပါ ပြန်ဖတ်ဖြစ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးစဉ်သတင်း၊ ပြန်ရောက်တဲ့သတင်းတွေအပြင် မြန်မာအစိုးရနဲ့ ရခိုင်တွေ သတ်လို့ ဘင်္ဂါလီ သောင်းဂဏန်းချီပြီး သေတယ်ဆိုတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတွေကိုလည်း ကြားသိရလို့ မောင်းတောမှာ စပြီး ဘင်္ဂါလီတွေ အကြမ်းဖက်လုိ့ ရခိုင်တွေသေကြရတဲ့ သတင်းကနေ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရလဲဆိုတာ နားမလည်နိုင်အောင်ကို ဖြစ်ရပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အတော်အဆက်အသွယ် ပြတ်နေပါလားလို့ သိလိုက်ပါတယ်။ ထားလိုက်တော့ အခုလောလောဆယ်မှာ ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောနေဖို့ ကျွန်မမှာ အချိန်မရသေးလို့ လတ်တလော ဆေးရုံမှာ ကျွန်မတွေ့ရတဲ့ မြန်မာလူနာတဦးရဲ့ နာမည်နဲ့ ဆက်စပ်တာကိုပဲ အစချီပြီး သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂလိပ်လို Burma ခေါ်တာကို ပုံကြီးချဲ့တဲ့ ကိစ္စကိုပဲ နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။
ဆေးရုံက လူနာအကြောင်းကို ပြန်စရရင် ကျွန်မ အလုပ်လုပ်တဲ့ ဆေးရုံမှာ မြန်မာပြည်က လာတဲ့လူမျိုးတွေထဲက လူနာဆိုတာ တော်တော်လေး တွေ့ရခဲပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ မြန်မာလူနာတဦး ရောက်နေတဲ့အကြောင်းကို အဲဒီ Ward က Staff တယောက်က ကျွန်မကို ဆေးရုံကင်တင်းမှာ တွေ့တော့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ Ward ထဲမှာ ဗမာလူမျိုး လူနာတယောက် (a Burmese patient) ရောက်နေကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ကျွန်မက ဗမာဆိုတာ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား နင်ပြောတဲ့ ဗမာဆိုတာ ဟိုတခါကလို မြန်မာတမတ်သားပဲပါပြီး မြန်မာလိုပြောမတတ်တဲ့ ဗမာပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ ကျွန်မက နောက်ပြီး ပြန်မေးလိုက်တယ်။ သူက ဒီတခါတော ဗမာစစ်စစ်ပဲတဲ့။ ဒီလိုပါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ခန့်က အဲဒီ Staff ကပဲ ကျွန်မကို နင်တို့ဗမာလူမျိုးတဦး ဆေးရုံလာတက်နေတယ်ပြောလို့ ကျွန်မ သွားကြည့်တော့ မင်္ဂလာပါ၊ နေကောင်းလား စသည်ဖြင့် တခွန်းနှစ်ခွန်းစပဲ ဗမာလို ပြောတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်သွေး သုံးမတ်ပါပြီး ဗမာသွေးတမတ်ပဲ ပါတဲ့ လူနာတယောက်ကို တွေ့ဖူးတာကို သတိရလို့လို့ ကျွန်မက သူ့ကို ဒီလိုပြောလိုက်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့ကတော့ အဲဒီWard မှာ ကျွန်မ တာဝန်ကျလို့ သူပြောတဲ့ ဗမာလူနာကို ကျွန်မတွေ့ရပါတယ်။ သူပြောတာ မှန်ပါတယ် ဒီတခါတော့ ကပြားမဟုတ်ဘူး တရုတ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် မြန်မာစစ်စစ် အမျိုးသားတဦးကို တွေ့ရပါတယ်။ သူ့နာမည်က မ ရပင့်၊ ရရစ်သံနဲ့ ပေါင်းတဲ့ နာမည် (မျိုး၊ မြင့်၊ မြတ်၊ မြိုင် တခုခု ဆိုပါတော့) ဆိုတော့ အဲဒီ Ward က Staff အတော်များများက သူ့နာမည်ကို ခေါ်မတတ်လို့ Handover ပေးတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်မကို သူ့နာမည် ဘယ်လိုအသံထွက်လဲလို့ အဲဒီနေ့က ၀ိုင်းမေးကြတော့ ကျွန်မက ပြောပြရတယ်။ ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတာ သိသွားပေမဲ့ အဲဒီအသံ မျိုးတို့ မြင့်တို့ ဆိုတဲ့ မရရစ်အသံမျိုးကို အာရှသားတွေကလွဲရင် တခြားဒေသကလူတွေအတွက် တော်တော်လေးကို ခေါ်ရခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာပြည်ကို သူ့လျှာနဲ့သူလိုက်အောင် ခေါ်နေတဲ့ Burma ဆိုတဲ့ အသုံးကို Myanmar လို့ ပြောင်းထားတာကို သွားသတိရပြီး သူ့နာမည်ကို ခေါ်ရခက်သလို နင်တို့နိုင်ငံကို အခုပြောင်းထားတဲ့ Funny name ကိုလည်း တော်တော်ခေါ်ရခက်တယ်လို့ တယောက်က ပြောပြန်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း အချိန်မရတဲ့ကြားက ဒီပို့စ်ကို ရေးစရာအကြောင်း ပေါ်လာပါတယ်။
မရရစ်အသံနဲ့ စကားကို နိုင်ငံခြားသားတွေ ခေါ်ရခက်လို့ ကျွန်မပြောပြရတာ ဒီတခါတည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် ၁၆ နှစ်ခန့်ကလည်း Alternative Asean ရုံးမှာ အလုပ်သင်ဝင်တုန်းက ရုံးကို လာလည်တဲ့ ဧည့်သည်တွေက ကိုအောင်မျိုးမင်းနာမည်ရဲ့ အရှေ့ဆုံးနာမည် Myo ကို ဘယ်လိုအသံထွက်လဲဆိုတာ မေးလို့ ကျွန်မ ပြောပြတော့ မရိုး လို့ခေါ်လို့ ရီရတာကိုလည်း ကျွန်မ မှတ်မိနေသေးတယ်။ Myanmar ကိုလည်း အသံထွက် မမှန်ကြလို့ မကြာခဏ ပြောပြရပြီး မြန်မာဆိုတာ ပီအောင် ဘယ်လိုပဲ ပြောပြပြောပြ မီရန်မာဖြစ်လိုက် မိုင်ရန်မာ မအန်မာဖြစ်လိုက်၊ မရန်မာ ဖြစ်လိုက်နဲ့ ပီအောင်ခေါ်နိုင်သူ သိပ်ကိုနည်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဗမာတွေလည်း သူများနိုင်ငံတချို့ကို ခေါ်တာ ဥပမာ ပြင်သစ်၊ တူရဂီ၊ ဘီးလပ် စသည်ဖြင့် သူများခေါ်သလို မခေါ်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မြန်မာနိုင်ငံကို သူများဘာသာစကား သူများအသံနဲ့ သူများသန်သလို ထွက်ပြီးခေါ်တဲ့ နာမည်ကို ကိုယ်က Burma မခေါ်ရဘူး Myanmar လို့ ခေါ်ရမယ်လို့ သူများအတွက် ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ အသံနဲ့ ခေါ်ဖို့ ဘာကြောင့် သွားပြောင်းပေးချင်ရတာလဲဆိုတာ နားလည်လို့ကိုမရဖြစ်မိတယ်။
အခုလတ်တလော သတင်းထဲမှာ ဖတ်ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ Burma သုံးပြီး ခေါ်တဲ့အတွက် ဥပဒေချိုးဖေါက်တယ်ဆိုပြီး အကွိုင်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ Burma ကို Myanmar ပြောင်းတာ မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူး န၀တလက်ထက်က ပြောင်းပုံပြောင်းနည်းကို မကြိုက်လို့ဆိုတာ ပြောထားတာကို ကျွန်မ ဖတ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတော့ သူများဘာသာစကားကို ကိုယ်က လိုက်ပြောင်းပေးလို့ ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်တွေက မပြောင်းမချင်း ကြိက်လည်း Burma မကြိုက်လည်း Burma ပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ အတတ်ပြောချင်ပါတယ်။
မြန်မာလိုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗမာပြည် ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်လို့ ပြောရာမှာပဲ အငြင်းပွာစရာ ရှိနိုင်ပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အင်္ဂလိပ်တွေ ခေါ်သလို Burma လို့ ခေါ်တာကျတော့ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ပြောတာ သူတို့ခေါ်သလို ခေါ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာမှလည်း အငြင်းပွားစရာမလိုဘူး ဒါဟာ အမှန်ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာလေးတွေ နည်းနည်းပေးချင်ပါတယ် ယိုးဒယားတွေကို ဗမာတွေက ယိုးဒယား၊ ကရင်တွေက ရို၊ အင်္ဂလိပ်တွေက Thai လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ တရုတ်တွေကို ဗမာတွေက တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်တွေက Chinese လို့ခေါ်ပြီး ပြင်သစ်တွေက ချီးနွားလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးကို ဗမာတွေက ငှက်ပျောသီး၊ ကရင်တွေက တကီးသာ့ အင်္ဂလိပ်တွေက Banana လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ကရင်တွေကို ဗမာတွေက ကရင်၊ အင်္ဂလိပ်တွေက Karen, သူတို့ကိုယ်သူတို့ကျတော့ ပါ့ကညောလို့ ခေါ်ကြတယ်။ အဲဒီတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ အထက်မှာ ဥပမာပေးထားတဲ့ အမည်နာမ တခုစီကို ကရင်လိုပြောရင် ကရင်ခေါ်သလိုခေါ်ရမယ်၊ ဗမာလိုပြောရင် ဗမာခေါ်သလိုခေါ်ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် အင်္ဂလိပ်ခေါ်သလို ခေါ်ရမယ်၊ ပြင်သစ်လိုပြောရင် ပြင်သစ်ခေါ်သလို ခေါ်ရမယ်ဆိုတာ Common Sense သာမန်အသိနဲ့ သိလို့ ရပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီး အင်္ဂလိပ်ခေါ်သလို Burma/Burmese လို့ မခေါ်ဘဲ Myanmar လုိ့ ခေါ်တာ မှားတယ်။ ကရင်ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ခေါ်ရင် ရေးရင် Karen မခေါ်ဘဲ Kayin လို့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးတာခေါ်တာ မှားတယ်ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ ထိုနည်းအတူ ကရင်လိုနဲ့ ပြောရင် Karen လည်းမှားတယ် Kayin လည်းမှားတယ် ပါ့ကညောကသာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ တခြား အခေါ်အဝေါ်တွေအားလုံးလည်း သူ့ဘာသာကစားနဲ့ ခေါ်ရင် သူခေါ်သလို ခေါ်ရမှာ ဖြစ်လို့ ဒီဥပမာအတိုင်းပဲ ဖြစ်ရလိမ့်မယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လိုခေါ်လာတယ် စသည်ဖြင့် သမိုင်းနဲ့ ချီပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဘာမှမပြောပါဘူး။ ဘာသုတေသနပြုမှု၊ လေ့လာမှတ်သားမှုမှ မလိုဘဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားနဲ့ အခေါ်အဝေါ်တခုကို မြန်မာက ဥပဒေပြုပြီး ဒီလိုခေါ်ရမယ်လို့ မိမိဘာသာစကားမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူများအခေါ်အဝေါ်ကို ပြောင်းဖို့ရနိုင်မလားဆိုတာပဲ သာမန်အသိ (Common Sense) နဲ့ စဉ်းစားသင့်တာကိုပဲ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တခုကို ဒီလို ပြောင်းချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့ အများဆန္ဒနဲ့အညီ ပြောင်းလို့ရနိုင်ပါတယ်။ သူများဘာသာစကးနဲ့ ပြောရင် သူများခေါ်သလိုပဲ ဆက်ခေါ်နေမှာ ဖြစ်သလို ကျွန်မတို့ကလည်း ဒီလိုပဲ လိုက်ခေါ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်မက မြန်မာလိုကို ဗမာနဲ့ မြန်မာ ခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ပေါ် အများသဘောထားကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ အင်္ဂလိပ်တွေ ခေါ်တဲ့အတိုင်း Burma ကိုပဲ လက်ခံတယ်။ ဥပမာတွေလည်း ပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီလောက်ရှင်းတာ ဘာမှ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ Burma လို့ခေါ်တာဟာ ဘာဥပမဒေမှ ချိုးဖေါက်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ခြင်းသာ ဖြစ်လို့ သူ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောရင် သူခေါ်သလိုခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ Common sense ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်လက်ခံရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလေးကို ရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး ပုံကြီးချဲ့ကာ ပြဿနာမရှိ ပြဿနာလိုက်ရှာကာ အချိန်ဖြုန်းချင်သူ အားလုံးကို ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ အောက်ပါ ပထ၀ီဝင်မြေပုံထဲက နိုင်ငံကို လောလောဆယ်မှာ မြန်မာလို မြန်မာနိုင်ငံ၊ အင်္ဂလိပ်လို Burma ယိုးဒယားလို ပရာထေ့ဖါမား လို့ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံက ဘာသာစကားတွေနဲ့ ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိဘူး သိသူများရှိရင် ထည့်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ဖျော်ဆရာ says:
July 5, 2012 at 6:17 PM Reply
Burma (သို့) Myanmar
ကျွန်တော် ပြောမှာ က အမှန် အမှား မဟုတ်ပါ။
ဖြစ်ရပ် က လေး တစ်ခု ပါ။
အီရန် (သို့) ပါရှား ဆိုတဲ့ နိုင်ငံ လေး အကြောင်း ပါ။
ကမ္ဘာ က အီရန် လို့ သိတယ် ဗျာ။ ပါရှား လို့ ခေါ်လည်း လက်ခံ တယ်။
ရီစရာ ကလေး ပေါ့။
ပျော်ပျော်နေတတ် တဲ့ ကျွန်တော့ သူငယ်ချင်း ကို BURMA ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သိ လားလို့ မေးလိုက်တော့၊ သိတာ ပေါ့တဲ့
BURMA = Be Upstair Ready My Angel တဲ့ (သေပြီ ဆရာ)
ဒါဆို MYANMAR ကရော ဆိုတော့
MYANMAR = Many Years Ago, No Men Are Radiculitis (သွားပြီ)
လူပေါ့၊လူပျက်၊လူသွမ်း တွေကြောင့် ငါတို့ နိုင်ငံ အဖတ်ဆယ် လို့ ကို မရတော့ဘူး။
"ဘယ်လိုပဲ ခေါ်ခေါ် လူလေးစား ဖို့ လိုပါတယ်။"
အတည်ပြု ဖို့ လိုအပ် လာရင် တော့ မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ဦး အနေနဲ့ သမိုင်း အရသာ ဆုံးဖြတ် ပေး ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါ တယ်။
ရှေးအကျဆုံး ကျောက်စာ တွေက ဘယ်လို ညွှန်းသလည်း။ မွန်-မြန်မာ သမိုင်း ကရော ဘာပြော လည်း။
သမိုင်း ကို ဆုံးဖြတ် ခိုင်း စေချင် ပါတယ်။
(ကျွန်တော့ ရဲ့ ဆန္ဒမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။)
July 5, 2012 at 7:15 PM Reply
July 19, 2012 at 8:59 PM Reply
"Burma" လော၊ "မြန်မာ" လော (၁) says:
အခုတလော ဒေါ်စု ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စုတွေက ဒေါ်စု နိုင်ငံတကာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော မိန့်ခွန်းတွေမှာ ထည့်သုံးတဲ့ "Burma" ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် ကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ကြံဖန် အပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ တချို့ကလဲ ဂဒါဖီလေသံနဲ့တမျိုး၊ ကင်မ်ဂျူံ အီး လေသံနဲ့တဖုံ၊ မျိုးချစ်ဝါဒတွေ ဖေါဖေါသီသီ သုံးလို့ ဟစ်ကြွေးနေတာ သတိထားမိပါတယ်။
"မြန်မာ" ပဲ မှန်တယ်ပေါ့... "ဘားမား" က နယ်ချဲ့အခေါ်အဝေါ် ပါတဲ့။ မှန်ပါတယ်... သို့သော်....
"မရမ္မာ" ဆိုပြီး သုံးလာတဲ့ ပုဂံခေတ်ကနေ မြန်မာ ဖြစ်လာတဲ့ ခေတ်ကာလထိ ဗမာပြည်ကို ကျူးကျော်တဲ့ နယ်ချဲ့သမားများ ဆိုတာ ဗြိတိသျှအစိုးရ တခုထဲပဲ မဟုတ်ပါ။ မွန်ဂို၊ တရုတ်၊ Dutch ၊ ဗြိတိန်၊ ဂျပန်၊ ... ဆိုတာတွေလဲ ဗမာပြည်ကို ကျူးကျော်တဲ့ နယ်ချဲ့သမားများပါ။
ပုဂံကို သိမ်းခဲ့တဲ့ မွန်ဂို လူမျိုးတွေက " မဲာန်" လို့ခေါ်တာတဲ့၊ ကချင်တွေ ခေါ်တဲ့ လေသံနဲ့ ခတ်ဆင်ဆင်ပါ။ တရုတ်ကတော့ တရုတ်စကားနဲ့ "မိန်ဒဲန်" (Mian dian, 緬甸) လို့ သုံးပါတယ်။ အခုထိလဲ တရုတ်အစိုးရ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဒီအခေါ်အဝေါ် သုံးပါတယ်။ ဒီတော့ ဒေါ်စုလဲ တရုတ်စကား တတ်လို့ တရုတ်လို ပြောရင်တော့ ဒီအခေါ်အဝေါ် ("Mian dian") ပဲ သုံးဖို့ များပါတယ်။
Dutch တွေ ၀င်လာတော့ "Birma" လို့သုံးပြန်ပါတယ်။ အခုထိလဲ မပြောင်းသေးပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ တရားဝင်မှတ်တမ်းတွေမှာလဲ ဒီအခေါ်အဝေါ်ပါ။
ဗြိတိန်ဝင်တော့ "Burma" ဆိုပြီး အားလုံး အသုံးများတဲ့ အခေါ် ရလာတယ်။ Burma ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စကားပါ။ နောက်တော့ လွတ်လပ်ရေး မရခင် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေမှာ အင်္ဂလိပ်လို "Burma" ၊ ဗမာလို "မြန်မာ" ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေမှာလဲ ဒီလိုပဲ သုံးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ အခြေခံဥပဒေကို တရုတ်လိုပါ ဘာသာပြန်ထားရင်တော့ "မေဲန်ဒဲန်" လို့ပဲ တရုတ်စာနဲ့ ပြန်ဖြစ်မှာပါ။
ဂျပန်တွေ ၀င်လာတယ်၊ ဂျပန်တွေက သူတို့စကားနဲ့ "ဘီရူမာ" ビルマ ဆိုပြီး ခေါ်ပြန်တယ်။ ဂျပန်စကားပြော သတင်း မီဒီယာတွေမှာ မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေမှာ အခုထိ ဒီအခေါ် ("ဘီရူမာ") ပဲ သုံးပါတယ်။ အဲ... အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ဂျပန်မီဒီယာ တွေမှာတော့ "Burma" ("Myanmar") ဆိုပြီး သုံးလာတယ်။
ထိုင်းတွေက "ဖမား" လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ တရားဝင် အသုံးအနှုန်း တွေပါ။
"Burma" လော၊ "မြန်မာ" လော (၂) says:
August 1, 2012 at 10:08 AM Reply
ကချင်လူမျိုးတွေမှာလဲ ကိုယ့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ကိုယ် ရှိကြတယ်။ ကချင်လူမျိုးတွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ် "ကချင်" လို့ ဘယ်သူမှ မပြောဘူး၊ ဗမာလိုပြောမှ "ကျနော်က ကချင်ပါ" လို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးတွေ ကျတော့ မြန်မာပြည်ကို "Myen Mung" လို့ ခေါ်တယ်။ ကချင်တစ်ယောက်က ကချင်စကားပြောရင် "Myen Mung" လို့ ပြောတတ်ပေမယ့် ဗမာစကား ပြောရင်တော့ "မြန်မာပြည်" ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ထို့နည်းလည်းကောင်း၊ ကချင်စကားပြော ဗမာလူမျိုး တစ်ယောက်လဲ ကချင်လို ပြောရင် "Myen Mung" လို့ပဲ ထွက်မှာပါ။
ဒီလို ကွဲပြားတဲ့ အချက်ကို တချို့က "ဗမာကို အထင်သေးလို့ ခေါ်တယ်" ဆိုပြီး ကြံဖန် တွေးတတ်ကြပါတယ်။
ဗမာစကားမှာလဲ France ကို "ပြင်သစ်" ၊ ထိုင်းကို "ယိုးဒယား" ၊ China ကို "တရုတ်" ၊ Arakan ကို "ရခိုင်" ၊ Siam ကို ရှမ်း လို့ သုံးခြင်းသည် အဲဒီလူမျိုးကို အထင်သေးလို့မဟုတ်၊ ကိုယ့်အခေါ်အဝေါ်နဲ့ ကိုယ်သာ ဖြစ်တယ်။ တရုတ်တွေက သူတို့ကို သူတို့ "ကျူံးဂေါ့" လို့ပဲ ခေါ်လို့ ဗမာသတင်းစာတွေမှာ "ကျူံးဂေါ့" လို့ပဲ ရေးရမယ် ဆိုတာ မရှိသလို ဂျပန်တွေက သူတို့ကို သူတို့ "နီဟောန်း" (Nihon) လို့ သုံးခြင်းကြောင့် အင်္ဂလိပ် သတင်းစာတွေမှာ "Japan" လို့ သုံးတာကို အတွန့်မတက်ပါ။ ဂျပန်လူမျိုးလဲ အင်္ဂလိပ် စကားပြောရင် "Japan" လို့ပဲ သုံးပေမဲ့လို့ ဂျပန်စကား ပြောရင်တော့ "Nihon" ဖြစ်သွားတယ်။
"Burma" လော၊ "မြန်မာ" လော (၃) says:
August 1, 2012 at 10:11 AM Reply
ဒီလိုပါပဲ... ဒေါ်စုက အင်္ဂလိပ်လို ပြောတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာစကားအရ သုံးရမဲ့ "Burma" အသုံးအနုန်းကို သုံးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေကြောင်း အရလဲ မှန်နေပါသေးတယ်။ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၄၄၆ မှာ "ရှိပြီးသား တည်ဆဲ ဥပဒေများသည် ပြည်ထောင်စုလွတ်တော် က ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း မပြုသေးမီ ကာလထိ အတည်ဖြစ်သည်" လို့ အသိအလင်း ဖေါ်ပြထားလေတော့ အခုထိ လွတ်တော်မှာ ဒီအကြာင်း ဆွေးနွေးတာ မရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သုံးတဲ့ နယ်ပယ်မှာ "Burma" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တရားဝင် ဟောကြားခြင်း၊ ရေးသားခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း ပြုနိုင်သေး၏ လို့မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်စု ထိုင်းကိုသွားတုန်းက ထိုင်းစကားများတတ်ရင်တော့ဖြင့် "ဖမား" လို့ပဲ ပြောဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာစကားပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေမှာ "ဘားမားနိုင်ငံ" ဆိုတာတော့ မကြားဖူးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာပြည်သူများ ဆိုတာပဲ ကြားဖူးပါကြောင်းပါ ခင်ဗျား။
ဒီတော့ "Burma လော? မြန်မာ လော?" ဆိုတဲ့ နေရာမှာ လူမျိုးခြားဘာသာစကား အရ ကွဲပြီး ပြောဆိုတယ် ဆိုရင် မှားတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တော့ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်မှာ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ "ဗမာပြည်" လို့ပဲ ပြောပြော၊ "မြန်မာပြည်" လို့ပဲ ပြောပြော၊ ဒီလူမျိုး.. ဒီဘာသာစကား... ဒီယဉ်ကျေးမှု.... ဒီစာပေ သာ အဓိကကျတဲ့ အတွက် အတူတူလို့ပဲ မြင်ကြပါတယ်။ ဗမာပြည် ဆိုတဲ့ ပြည်နယ် တခု သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိလာရင်တော့ အမြင်တမျိုး ရှိကောင်း ရှိလာနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။ အားလုံး ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
အားလုံးကို လေးစားလျက် -